Global Voices teny Malagasy » Vakoka fanjonoana ao Taiwan: Trondro sy afo mandihy ambonin’ny ranomasina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2015 3:19 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Taiwan (ROC), Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Ny ekipam-panjonoana rehetra miasa miaraka hahazoana trondro. Saripika nalain'i Ming-Chih Chang.
Ny Peng Huo Tsai（蹦火仔）na “afo fanintonana” (indraindray adika ihany koa ho “afo solifara”) dia teknikam-panjonoana efa nampiasain'ny vahoaka teratany voalohany  tao Taiwan. Amin'ny alina ireo teratany mpanjono ireo no mandrehitra afo amin'ny bararata na hazo ao amin'ny samboon-dry zareo hanintonana ireo trondro milomano hanatona akaiky kokoa ny andian-tsambon-dry zareo.
Taty aoriana ity teknikam-panjonoan'ny teratany ity dia nisy namorona tamin'ny fomba hafa indray, ary nanomboka nampiasa ny solika kerosene ry zaeo handrehetana afo. Nandritra ny fanapahan'ny Japoney ry zareo mpanjono dia nivadika tamin'ny fampiasana ny etona acetylene hitehirizan-dry zareo ny afo. Ny etona dia teaka avy amin'ny taharo shimika amin'ny fametrahana ny lazaina ho “vato solifara” (calcium carbide) ao anaty rano.
Voatahiry mandraka ankehitriny ny teknikan'ny etona acetylene ao amin'ny helodranon'i Jinshan ao amin'ny morontsiraka avaratr'i Taiwan. Ny Helodrano dia nampiasaina hitaterana solifara  nangonina avy amin'ny tendrombohitra manodidina hatramin'ny fotoana nanapahan'ny espaniola (tanelanelan'ny 1626-1642).
Nalaza tokoa ny afo fanintonana ao amin'ny Hoalan'i Jinshan hatramin'ny fitondra-taranaka Qing ary fanintonan'olona tsy maintsy jerena  mandritra ny asara [fotoana mafana] rehefa maro ireo karazan-trondro milomano manodidina ny morontsiraka avaratr'i Taiwan. Nefa efa mihalefy ny teknikam-panjonoana nentin-drazana, raha andian-tsambo efatra sisa no mampiasa io fomba io.
Tamin'ny volana lasa teo, tamin'ny 31 aogositra dia voasoratra ho anisan'ny lovan-kolontsaina  eo ambany fitarihan'ny Departemantany Raharahan-Kolontsaina ao amin'ny Governemantan'ny Tanànan'i Taipei vaovao ny teknikam-panjonoana mampiasa etona acetylene.
Ny mpanao gazety Huei-Jen Lin avy ao amin'ny News Market, tranonkalam-baovao iray mahaleotena, no nanazava  hoe naninona ity teknika ity no miaro ny tontolo iainana kokoa:
Amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny sambo fanjonoana dia mampiasa fahazavana mahery loatra, ka mampipoaka ny mason-trondro. Voatsikera io fombafanjonoana io ary tsy naman'ny fiarovana ny tontolo iainana. Etsy andaniny, ny teknikam-panjonoana tahaka ny fampandihizana afo dia ampiharina amin'ny toerana kely ao anatin'ny fotoana fohy, ka dia heverina ho sakaizan'ny tontolo iainana.
Efa an-taonany no nianaran'ny  Studio Kolontsaina sy Tantara Jinshan ny teknikan'ny fampandihizana afo sy nanampiana tamin'ny fandaminana fitsangatsanganan'ny mpizahatany hiaina ny teknikam-panjonoana sy hahatakarana ny tombontsoany :
Sambo iray ihany no ilain'ny mpanjono hampiharana ity teknika ity. […] Azo folahina tsara.
Ahoana tsara ny ataon'ny mpanjono hahazoana ny trondro? Naka sary vitsivitsy tamin'ny asa ilay mpanao gazety Huei-Jen Lin avy ao amin'ny News Market ary namelabelatra  ny fanaovana azy amin'ny antsipirihany tao amin'ny tatitra nataony.
Mahazatra ny sambo mpitondra afo fanintonana ny miala ny oala amin'ny enina hariva. Rehefa hitandry zareo ny toerana misy ny trondro dia miverina ry zareo ary miandry mandra-pahamaizin'ny andro.
Tazonin'ny lehibe misahana ny afo ny fanilo hisamborana ny trondro. Sary avy amin'i Ray J. Lee.
Ny lehiben'ny afo no mitarika ny ekipam-panjonoana, izay matetika ahitana ireto mpikambana manaraka ireto [jereo ny sary eo an-tampon'ny tsanganana]:
Mila mpikambam-panaratoana dimy ireo mpanjono antsoina hoe “tongotry ny ranomasimbe” hamelarana ny harato sy hanangonana azy. Ny asan'ireo mpanjono ireo, misy mijoro eo an-dohatsambo ka hatrany aoriana, dia ny misintona ny harato, misintona ny tsatokazo, mifehy ny tsatokazo (i.e., misahana ny fanaratoana), mandroboka ny tsatokazo sy mampakatra ny tsatokazo. […] Misy ny ekipa ao amin'ny sambo antsoina hoe tompon'ny solifara, izay miandraikitra ny fanoloana ny vato solifara [calcium carbide] sy manaramaso ny hadirin'ny rano hamelomana indray ny etona acetylene. […] Manandanja hafa ihany koa ny mpanamory ny sambo. Mpanamory sambo efa za-draharaha izay mijery ny samontan'ny rano sy ny onjan-dranomasimbe manampy ny lehiben'ny afo amin'ny fitadiavana ny trondro. Rehefa mihamanakaiky ny trondro dia mila mijanona ny mpanamory ny sambo na mihodina manakaiky kokoa hahitan'ilay boain'ny fanaratoana mahita ny zoro tsara indrindra hamelarana ny harato.
Rehefa manakaiky ny tondro ny sambo fanjonoana dia mivonona ho amin'ny fihazana avokoa ny ekipa rehetra ao ambony sambo:
Ireo mpanjono tompon'andraikitry ny fanesorana ny bao [andry] dia manangana ny bao ankavia hanamboarana ny harato amin'ny riran'ny sambo. Mihazona ny fofon'ainy ny ekipairay manontolo ary miandry ny lehiben'ny afo hamelona azy ary hamantana ny andian-trondro ho ao anaty harato ao ankavia aorian'ny sambo.
Vantany vao manome baiko ny lehiben'ny afo hoe “Arotsahy,” dia atosiky ny ekipam-panaratoana an-dranomasina ny harato. Rehefa miditra ao anaty harato ny trondro, da teren'ny ekipam-panaratoana ireo bao ary mampiasa ny fanoitra ry zareo hampakarana ny harato. Taritarihana akaikin'ireo mpanjono ny sardinina velona ary arotsaka avy hatrany ao anaty fitoerany. Indraindray be loatra ny tondro [ao anaty harato], ka mpanjono telo na efatra no ilaina miasa miarak hampakarana ny harato.
Vita ao anatin'ny 10 segondra ny fombafomba rehetra. Samy manana ny andraikiny manokana ny tsirairay ao anaty sambo ary mila miaraka miasa ry zareo. Raha betsaka ny trondro dia mety hanapa-kevitra ny hamelona ny afo manonjanonja in'efatra na in-dimy isesy ny lehiben'ny afo ary mila manokatra, sy manipy an-drano ary misintona ny harato indray ny ekipam-panaratoana, ary mamerimberina izany imbetsaka. Raha betsaka ny vokatra dia mety mamerina ny fanaony in-jato ao anatin'ny indray alina ny ekipam-panjonoana.
Manasongadina ny fiaraha-miasa ny teknikam-panonjanonjana afo. Tena zava-dehibe tokoa ny finamanana eo amin'ny mpitondra sambo sy ny lehiben'ny afo ary ny ekipam-panaratoana.
Jereo ny lahatsary youtube notontosain'ny News Market ijerena ny fomba fiarahan'ny afo manonjanonja miasa amin'ny fisamborana trondro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/21/74792/
 vahoaka teratany voalohany: http://www.xn--2015-y35f343e245aje4c7og.com/menu2-about_1.html
 ary fanintonan'olona tsy maintsy jerena: http://mypaper.pchome.com.tw/lkk96_mypaper/post/1281794382
 voasoratra ho anisan'ny lovan-kolontsaina: http://www.thenewslens.com/post/213001/